South Sudan lelona lizwe entsha ehlabathini. Ekubeni yafumana inkululeko kwiRiphabliki Sudan ngo-2011 kuphela. Ikomkhulu lelizwe iJuba. Nangona kunjalo, ayililo ilizwe elidumileyo kwezokhenketho. Mhlawumbi ngenxa yokuba
Ungawufumana njani umsebenzi eSouth Sudan?
January 9, 2022 UKaruna Chandna imisebenzi, South Sudan
Uninzi lwemisebenzi elungileyo eSouth Sudan ikumzi weoyile kunye negesi. Imfundo yelizwe kunye namaziko ezempilo anokungathembeki, ngoko ke, nabani na onokukwazi ukuyihlawula, bane-inshurensi kunye nokufikelela kwiinkonzo zabucala. Abemi
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eSouth Sudan?
Disemba 16, 2021 UAntika Kumari imali, South Sudan
Iibhanki ziye zaba ngamaziko aphambili ezemali kwiminyaka yakutshanje. Iibhanki zinika indawo ekhuselekileyo esinokuthi siqhube ishishini lethu kuyo kwaye silawule iimali zethu. Wonke umntu kufuneka avule i-akhawunti yebhanki ukuze afumane iinkonzo zebhanki zobungcali. It
1 2 3 ... 5 I zithuba ezilandelayo»